Muqdisho oo la isku ciidan uruursanayo - BBC News Somali
Muqdisho oo la isku ciidan uruursanayo
5 Sebtembar 2010
Al-Shabaab, ayaa soo bandhigtay boqolaal ciidamo ah oo ay la sheegay in tababar u soo dhamaadaan, Amisom-na waxay sheego saldhigyo cusub ee ciidankeedu ka degan Muqdisho.
Al-Shabaab, ayaa dhoolatuska ciidan ku soo bandhigtay xaafadda Suuqa Xoolaha ee Muqdisho, iyagoo sheegay in ciidamadan tababarka loo xiray laga kala keenay gobolada dalka, ayna ka dagaal gali doonaan magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, ciidamada AMISOM ee Midowga Africa nabad ilaalinta u geeyay Soomaaliya, ayaa sheegay in ay fariisimo cusub ka samaysteen goobo ka mid ah magaalada Muqdisho oo ku yaalla xaafadaha Dharkeenley, Hodan, Howl-wadaag, Shibis iyo meelo kale.
Waxaa soo baxayay warar sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ciidamo hor leh oo ka socda AMISOM, gaar ahaan dalka Uganda ay soo gaarayeen Muqdisho iyaga iyo qalabkooda, hase yeeshee, afhayeenka AMISOM ayaa ka gaabsaday ciidamo dheeraad ah in ay u yimaadeen iyo in kale, isagoo BBC u cadeeyay in goobo cusub ay ka degeen Muqdisho.
Kordhinta ciidamada dhinacyada, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ku dhowaad laba todobaad dagaalo xoog leh ay ka socdeen Muqdisho, inkastoo maalmihii u dambeeyay ay qaboobeen, dagaaladaas oo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo qof.
Ciidamada AMISOM, oo ay la socdaan kuwa dowladda ku meelgaarka ah iyo kuwa Ahlu-Sunnah Waljamaca oo dhinac ka soo wadajeeda, ayay is horfadhiyaan xoogaga kacdoonka mucaaradka Islaamiyiinta ee al-Shabaab iyo kuwa Xisbul-Islaam.